Ny Festival Tulip Kanadiana 2019 dia nahasarika olona betsaka indrindra tao anatin'ny folo taona
Home » Toerana fitsangatsanganana » Ny Festival Tulip Kanadiana 2019 dia nahasarika olona betsaka indrindra tao anatin'ny folo taona
Na eo aza ny toetrandro mangatsiaka sy ny orana indraindray, ny Fetiben'ny Tulip kanadiana faha-67 taona dia nahasarika olona mihoatra ny 600,000 ho any amin'ny farafaran'ny tulip ao amin'ny Commersers Park.
“Ny fiverenanay ny hetsika hetsika rehetra ho amin'ny fotony niavian'ny festival… ny tulip an'ny National Capital Commission dia mampiseho ny moron'ny Farihin'i Dow… miaraka amin'ny fitantarana ny tantara sy ny fampihetseham-po maivana ary ny varotra tsara nataon'ny orinasam-pitantanana ankapobeny ny festival, Karma Creative Solutions , hanazava ny vokatra miavaka amin'ity taona ity, ”hoy ny filoham-pirenena mpilatsaka an-tsitrapo ny Festival, Grant Hooker.
Tamin'ny fararanon'ny taona 2018, nanatona ny Komisiona Nasionaly ny mpikarakara ny festival tamin'ny fangatahana mba hampifantoka ny asan'izy ireo amin'ny taona 2019 eo amin'ireo fandriana tulip ao amin'ny Commersers Park akaikin'ny Farihin'i Dow. Nahazoan-dàlana hametraka tranolay "pavilion" lehibe roa ao afovoan'ilay valan-javaboary. “Pavilion Tulip” tamin'ny fitantarana tantara momba ny fambolena sy fiompiana ary «Pavilion lova» nitantara ny niandohan'ny Fetibe.
Ny masoivoho ho an'ny fanjakan'ny Netherlands dia nanatona ny fangatahana hanova ny tranofiara fampisehoana ho sehatra fampisehoana, ary nantsoina hoe Theatre Dutch. Nahazoan-dàlana ary i Julian Armor, mpanorina sy talen'ny artista tamin'ny fetin'ny volana jolay, Music & Beyond, dia nikarakara fampisehoana "Music & Tulips" 33 ho an'ny mpijery nandritra ny hetsika festival tulip 11 andro.
"Ny fanehoan-kevitry ny besinimaro an'ireo Pavilions roa dia tsara sy nampahery hatramin'ny andro voalohany," hoy ny mpiara-miasa amin'i Karma Creative Solution ary ny tale jeneralin'ny Festival, Jo Riding. "Nankasitraka manokana ny olona fa ny tantaran'ny Ady Lehibe Faharoa izay nitarika ny fananganana ny Fetibenay dia natolotra tamin'ny taranaka vaovao sy amin'ireo Kanadiana vaovao. Nangatsiaka tsy nampoizina ny toetrandro, fa nafana ny fo. Fahatsiarovana no natao ary tsiky dia hita hatraiza hatraiza. ”
Ny fifandraisana akaiky eo amin'ny Fetibe, ny Kaomisiona Nasionaly Nasionaly, ary ny Masoivoho an'ny Fanjakan'i Nederlanda tamin'ity taona ity dia nitarika fanombohana teo am-piomanana amin'ny fanontana fety tena manokana amin'ny taona 2020.
"Ny faha-5 Mey 2020 no tsingerintaona faha-75 nandresen'ireo miaramila kanadiana izay nanafaka ny Netherlands tamin'ny taona dimy sy tapany nanjakany", hoy ny filohan'ny Festival Hooker. “Hanamarika ny faha-75 taonan'ny faran'ny Ady Lehibe Faharoa koa io. Io ady io sy ny fanafahana kanadiana an'i Netherlands dia niteraka ny fandriana tulip NCC ary avy eo ny Festival Tulip Kanadiana. Manana adidy amin'ny fakantsika isika hamokatra hetsika amin'ny taona 2020 izay hankalaza ny fahatsiarovana fahalalahana sy hanome voninahitra. Ary, ny fiaraha-miasa amin'ny NCC, ny Holandey, ary ireo mpiara-miombon'antoka hafa, izany indrindra no kasainay hatao. ”
Museum of Ice Cream San Francisco mandefa Pride Fankalazana